Ngamnye wethu ngokukhawuleza ufumana amandla kuye kwaye enze i-feat-aqhuba ukucoca ngokubanzi endlwini. Silahla iibhokisi, izinto eziphukile, iimpahla ezindala. Kodwa ngesizathu esithile sihlala sikhohlwe ngehlabathi lethu elingaphakathi. Kwaye akukho nto iqokelele inkunkuma? Ngaba akukho nto inokuthi idlulileyo ixesha elide kunye nangalo lonke? Kubalulekile ukwazi ngokucacileyo oko kuya kuba luncedo kuwe, nokuba yintoni enelunzima.
Mhlawumbi, abo bathi abazange bamkhonze umntu ebomini babo banobuqhetseba. Ngokukhawuleza okanye kamva, umona uyasifumana kwaye ungabi msinya ukuyeka. Ummelwane unomfanekiso omhle, awawuzuze ilifa, kwaye awuzange ushiye i-gym ngonyaka. Umlingani waba yintloko yonyaka emva kokugqweswa kwiyunivesithi, uhleli kwindawo enye iminyaka emihlanu.Othile unomyeni, kwaye unganayo inja. Omnye unemoto enkulu, kwaye unayo ibhayisekile ebhaleni. Kukho izizathu ezininzi zokuba nomona, mnike nje ukuthanda kwakhe, njengoko esongela ukuphazamisa intloko yakhe.
Umona uvelisa ukwesaba kwethu, ukuzisola ngamathuba alahlekileyo, iingxaki kunye neengcinga. Ummelwane ngokwenene unokuba ngumfazi oliqathayo okhwaza nje ngeengubo zangaphantsi ezilungiswayo ongazikrokreli. Umlingane waba yintloko yekhanda, kuba wayefanele abe yinkosikazi yamandulo kunye noMphathi oyiNtloko. Umyeni womnye umntu utshintsha umntu, inqwelo yemoto kunye nokwandiswa kweenwele. Kodwa awukwazi ngale nto kwaye uqhubeka unomona.
Mhlawumbi, le mvakalelo kufuneka iphonswe ngaphandle.
Ngamnye wethu uzijonga njengoyedwa kwaye unelungelo lokwenza njalo. Ukuba uqinisekile ngokuqinisekileyo ukuba akukho mntu ungcono kunakho kwaye akakwazi ukuba, ukuba ucinga ukuba wonke umntu akufanele akuthande nje ngenxa yokuba ukhona, nangona uziphatha ngayo, ezi zivele ziyingxaki. Ekugqibeleni, unokucingwa njengomntu ongeyena ongabonakaliyo kwaye uhlale wedwa.
Gxotha i-ego yakho enkulu, eyakukhusela ixesha elide ukuba uphile, unamathele kuzo zonke iingxube ezibukhali kunye nokulimaza abanye. Uya kwandula uzive ukhululekile kwaye ungalindelanga ukuhlala ufumanisa ukuxilongwa kwe-megalomania.
Ngaba awuzange uqaphele ukuba kuzo zonke iziganeko ezilungeleyo nezingenakunqwenela uqala ukufundisa abanye ubomi? Ngaba usasaza isilungiso ngakwesokunene nangasesekhohlo, nangona xa ungaceliwanga? Ukuba awuvumeli izalamane zenze izixazululo zomntu ngokwazo, ukuba udibana kunye nokubeka uluvo lwakho, lixesha lokuyeka. Cinga, ngaba uluvo lwakho luyinyaniso kuphela okanye, kwaye unokwenza umpazamo? Yeka uphinde ulahle indlela yokufundisa wonke umntu kunye nomntu wonke kwaye uya kubona ukuba kukho izinto ezininzi ezithakazelisayo kwihlabathi ukuba ungazi.
Abanye abantu abafihlekanga iimpazamo zabo, bayabathanda, bawaxabise kwaye bawaxabise. Bayazibona zombini ubuqhetseba bokuxoka, kunye nemilenze ephosakeleyo, kunye nokuxhamla, kunye nobuthakathaka, kodwa ... abakhupheli ukulilahla. Ukuba ucinga isihloko esilungileyo kuncokola ngengxoxo yakho, ke kufuneka uqaphele ukuba awunabo abahlobo abaninzi, kodwa wonke umntu ofuna ukuba ngumcuphi ufikelele kwisigulane ngokwakhe.
Gweba ukuzithethelela kwaye uqale ukuphelisa izizathu zokuba ufuna ukuzixolisa.
Ewe, ngamanye amaxesha abantu abasondeleyo benza izinto ezintle, ezingenakuphendulwa. Kodwa ukuba uyabuyisela abantu ngenxa yezizathu zonke-kwaye ukuba uphonsele esitratweni kunye nokuba unqatshelwe umvuzo, kuyafaneleka ukuba uqwalasele oko kukuphosakeleyo nawe. Kwezinye iinkathazo, unokuzibeka ityala kuwe, kungekhona kwabanye. Musa ukugxeka amahlombe abo. Ukuxolela abantu abaphosakeleyo okanye bakucaphukile ngokukhethekileyo, zama ukulibala ezi zikhalazo uze uziphephe. Zama ukuhlala ngokungafaniyo, ukuba ube noxolo. Uza kuziva ngokukhawuleza ukuba ubomi bube lula njani ngaphandle kwenzondo ecinezelayo.
Sonke sinemiphumo. Omnye uthanda ukwenza izithembiso kwaye akaze azizalisekise. Omnye uhlambalaza ngalo lonke ixesha, umntu ulala ngento yonke, umntu akakwazi ukuthetha nantoni na ngaphandle kwezinye. Asisoloko siqaphela ezi mpazamo kuthi, kodwa sihlala sibona kwabanye. Mhlawumbi ukucocwa ngokuqhelekileyo ngokuqhelekileyo kuyindlela enhle kakhulu yokususa umthwalo wemikhwa emibi. Endaweni yabo inokuza nezinye, ezo ziza kukuphucula.
Isipho esingavamile kwiSuku sikaValentine: iingcamango ezingavamile zokubonisa
Ukufudukela kwindawo yokuhlala ngonaphakade
Xa Usuku LukaValentine: yintoni isiko lokunika uSuku lwabathandekileyo, iimbali zomthendeleko
Yintoni eyenza umfazi ongeyena wesondo
Iimvumba ze-Varicose eziphelileyo
Indlela yokuba yinkokeli kuluntu
Uvuyo olungummangaliso ngomtshato womtshato kwivesi kunye neprose